Casual Graffiti ကိုရီးယား Breathable Army အစိမ်းရောင် Flat Lovers ဖိနပ်များကို ၀ ယ်ပါ WoopShop®
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရာဖီတီပန်းချီကိုရီးယား Breathable ကြည်းတပ်အစိမ်းရောင် Flat မိတ်ဆွေတို့ကိုဖိနပ်
ဖိနပ်ကိုအမေရိကန် Size ကို65.5 6.5 7.5 8.5 9.579 8
အရောင် Black က အနီရောငျ ဝါသော အဖြူအနက်ရောင် မီးခိုးရောင် Black ကရွှေ အဖြူ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် GREEN
6 / Black က 5.5 / Black က 6.5 / Black က 7.5 / Black က 8.5 / Black က 9.5 / Black က7/ Black က9/ Black က 8 / Black က6/ နီ 5.5 / နီ 6.5 / နီ 7.5 / နီ 8.5 / နီ 9.5 / နီ7/ နီ9/ နီ 8 / နီ6/ အဝါရောင် 5.5 / အဝါရောင် 6.5 / အဝါရောင် 7.5 / အဝါရောင် 8.5 / အဝါရောင် 9.5 / အဝါရောင်7/ အဝါရောင်9/ အဝါရောင် 8 / အဝါရောင်6/ အနက်ရောင်အဖြူ 5.5 / အနက်ရောင်အဖြူ 6.5 / အနက်ရောင်အဖြူ 7.5 / အနက်ရောင်အဖြူ 8.5 / အနက်ရောင်အဖြူ 9.5 / အနက်ရောင်အဖြူ7/ အနက်ရောင်အဖြူ9/ အနက်ရောင်အဖြူ 8 / အနက်ရောင်အဖြူ6/ မီးခိုးရောင် 5.5 / မီးခိုးရောင် 6.5 / မီးခိုးရောင် 7.5 / မီးခိုးရောင် 8.5 / မီးခိုးရောင် 9.5 / မီးခိုးရောင်7/ မီးခိုးရောင်9/ မီးခိုးရောင် 8 / မီးခိုးရောင်6/ အနက်ရောင်ရွှေ 5.5 / အနက်ရောင်ရွှေ 6.5 / အနက်ရောင်ရွှေ 7.5 / အနက်ရောင်ရွှေ 8.5 / အနက်ရောင်ရွှေ 9.5 / အနက်ရောင်ရွှေ7/ အနက်ရောင်ရွှေ9/ အနက်ရောင်ရွှေ 8 / အနက်ရောင်ရွှေ6/ အဖြူ 5.5 / အဖြူ 6.5 / အဖြူ 7.5 / အဖြူ 8.5 / အဖြူ 9.5 / အဖြူ7/ အဖြူ9/ အဖြူ 8 / အဖြူ6/ GREY အစိမ်းရောင် 5.5 / GREY အစိမ်းရောင် 6.5 / GREY အစိမ်းရောင် 7.5 / GREY အစိမ်းရောင် 8.5 / GREY အစိမ်းရောင် 9.5 / GREY အစိမ်းရောင်7/ GREY အစိမ်းရောင်9/ GREY အစိမ်းရောင် 8 / GREY အစိမ်းရောင်
ကျပန်းဂရက်ဖစ်ကိုရီးယား Breathable Army Green Flat Lovers ဖိနပ် - ၆ / အနက်ရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
pattern အမျိုးအစား: ဂရက်ဖတီ
Vulcanized ဖိနပ်: Yes
အမေရိကန်7= Foot ရှည် 24.1cm-24.5cm = တရုတ် Size ကို 39
အမေရိကန် 7.5 = Foot ရှည် 24.6cm-25cm = တရုတ် Size ကို 40
အမေရိကန် 8 = Foot ရှည် 25.1cm-25.5cm = တရုတ် Size ကို 41
အမေရိကန် 8.5 = Foot ရှည် 25.6cm-26cm = တရုတ် Size ကို 42
အမေရိကန်9= Foot ရှည် 26.1cm-26.5cm = တရုတ် Size ကို 43
အမေရိကန် 9.5 = Foot ရှည် 26.6cm-27cm = တရုတ် Size ကို 44
အမေရိကန် 10.5 = Foot ရှည် 27.1cm-27.5cm = တရုတ် Size ကို 45
အံ့သြဖွယ် !! စူပါအရွယ်အစားနှင့်နေဆဲ !!
est parfait ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်, trés Jolie Sneaker!
လှပသောဖိနပ် ... အရွယ်အစားဇယားအရကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရွယ်အစား ၉ အမိန့်ရှိသည်။ ကံမကောင်းတာကအရွယ်အစား ၄၁ အရွယ်အတွက် ... စိတ်မကောင်းပါဘူး။